टीका किन लगाउने ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ कार्तिक ५, बुधबार १२:२३ गते
निधारमा लगाउने चन्दन, अबिर, केसरी आदिलाई टीका भनिन्छ । महिलाहरुले सिउँदोमा लाउने सिन्दूरलाई पनि टीका नै भनिन्छ । ठाडो, तेर्सो र गोलो गरी सामान्यतया टीका तीन प्रकारका हुन्छन् । निश्चित सम्प्रदायविशेषमा ठाडो र तेर्सो टीका लगाइन्छ भने कुनै सम्प्रदायविशेषमा दीक्षित नभएका व्यक्तिहरुले प्रायः गोलो टीका लगाउने गरेको देखिन्छ । वर्तमान समयमा सम्प्रदायविशेषमा दीक्षित भएका ठाडो र तेर्सो टीका लगाउने व्यक्तिहरुका तुलनामा गोलो टीका लगाउनेहरुको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ । सम्प्रदायविशेषमा दीक्षित भएकाले सदैव टीका लगाइरहने र अन्य व्यक्तिले कुनै पूजा वा उत्सवविशेषमा मात्र टीका लगाउने गर्नाले धेरैजसोको निधारमा सधैँ टीका लगाएको देख्ने अवसर प्राप्त नभएको हो ।
विदेशी अनुसन्धाताद्वारा सोधिएको कालो टीकाको प्रश्न अनुत्तरित :
करिब डेढ दशकअघिको कुरो हो । पिएचडीको अनुसन्धान सकेर म राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका संस्कृत व्याकरणका अभिलेखहरुको माइक्रो फिल्मबाट अध्ययन गर्दै थिएँ । त्यसैबेला भक्तपुरका एकजना नेवार मित्रसँग पनि मेरो परिचय भयो । जापान गएका बेलामा एकजना जापानिज महिलाले उनीसँग ‘नेपालीले कालो टीका किन लगाउँछन् ?’ भनेर प्रश्न राखिछन् । हिन्दुहरु बढ्ता भएको मुलुकका नागरिकबाट निश्चय नै कालो टीकाका बारेमा थप जानकारी पाइएला र आफ्नो अनुसन्धानमा केही सहयोग पुग्ला भन्ने उनको अपेक्षा थियो होला तर नेपाली ती मित्रले “बाहुनले हवन गरेर तरेखु बनाउँछन् र लगाइदिन्छन्, त्यसबारे आपूmलाई थप जानकारी छैन” भनेर विदेशीका सामु आपूm निरूत्तर हुनुपरेको बताएछन् । त्यसपछि हिन्दु टीकाकै बारेमा पिएचडी तहको अनुसन्धान गर्दै गरेकी ती जापानिज महिलाले कालो टीकाका बारेमा वेदमा र पुराणमा भएका सन्दर्भहरु सरसर्ती भन्दा ती मित्र लाजले भुतुक्कै भएछन् । कैयौँ पुस्तादेखि आफ्ना पुर्खाहरुले लगाउँदै आएको कालो टीकाका बारेमा आपूm निरूत्तर रहनुपर्ने तर कहिल्यै कालो टीका नलगाएकी अहिन्दु विदेशी महिलाले भने त्यसका बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरेको देख्ता ती मित्रले आपूmलाई ‘माल पाएर पनि चाल नपाएको’ व्यक्ति ठान्न विवश भएछन् । तसर्थ हामी पनि त्यसरी निरूत्तर बन्ने परिस्थिति नआइदियोस् भन्नका लागि हामीले अँगाल्दै आएका सांस्कृतिक परम्पराहरु हामीले किन अँगालिरहेका छौँ ? भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी लिनबाट हामीहरु बेखबर बन्नु हुँदैन ।
टीका नलगाईकन कुन कुन कर्महरु गर्न हुँदैन ?
स्नानं दानं तपो होमो
देवतापितृकर्म च ।
तत्सर्वं निष्फलं याति
ललाटे तिलकं विना ।।
अर्थात् नुहाउँदा, दान गर्दा, तपस्या गर्दा, होम गर्दा, पूजा गर्दा र पितृकर्म (श्राद्ध) गर्दा पनि निधारमा टीका नलगाएका खण्डमा यी सबै कर्महरु निष्फल हुन्छन् । साथै सन्ध्यावन्दन, तर्पण आदि गर्दा पनि सदैव टीका लगाएरै गर्नुपर्छ । देवतालाई नचढाईकन टीका लगाउन नहुने भएकाले नुहाउँदा र सन्ध्यावन्दन गर्दा तत्काल चढाइएको टीका उपलब्ध नहुने भएका कारण यस अवस्थामा जलकै टीका लगाउन सकिन्छ । साथै माटो पनि नचढाईकन टीका लगाउन सकिने भएकाले तीर्थस्थलका माटाको टीकासमेत लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । माटाको टीका लगाउनुपर्दा ऊध्र्वपुण्ड्र अर्थात् ठाडो टीका लगाउने, यज्ञको भस्म अर्थात् खरानीको टीका लगाउनुपर्दा त्रिपुण्ड्र अर्थात् तेर्सो टीका लगाउने र चन्दनको टीकाचाहिँ ऊध्र्वपुण्ड्र र त्रिपुण्ड्र दुवै किसिमले लगाउने सकिन्छ ।
निधारका बीचमा टीका किन लगाउने ?
हाम्रो मनमा जुन कर्म गर्ने सङ्कल्प जागृत हुन्छ त्यसको प्रकम्पन सर्वप्रथम हाम्रो मस्तिष्कका धमनीहरुमा हुन्छ । हाम्रो मस्तिष्क विकाररहित र शान्त बनाइराख्नका लागि आँखीभौँ र निधारको बीच भागमा रहेको विचारको केन्द्रविन्दु स्थलमा तेस्रो नेत्रको प्रतीकका रुपमा टीका लगाउने गरिन्छ । बढ्ता विचार गरिरहनुपर्ने परिस्थितिमा यही केन्द्रविन्दुले पीडाको अनुभूति गर्दछ र हाम्रो पूरै टाउको दुख्न थाल्छ । हाम्रो शरीरमा विद्यमान शुक्र नामक धातुको निधारसँग बढ्ता सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले युवावस्थाको परिपक्वताको लक्षणका रुपमा निधारमा डन्डीफोरहरु आउने गर्छन् । शुक्र धातुको रक्षा गरी सदैव ब्रह्मचर्य पालन गर्नका लागि समेत सम्भव भएसम्म तीर्थस्थलका माटाको र यज्ञभस्मको टीका तथा सम्भव नभएका खण्डमा शुद्ध चन्दनको टीका लगाइरहनु लाभदायक हुन्छ ।
माटो र चन्दनको टीका नै किन लगाउने ?
आजकल बजारमा विभिन्न हानिकारक केमिकल मिसाइएका टीकाहरुको बिक्री बढ्ता हुने गरेको छ । त्यस्ता टीकाले हाम्रो निधारको छालालाई असर गर्छ । त्यसैले हाम्रा ऋषिमुनिहरुले माटाको टीकालाई सर्वसुलभ र स्वास्थ्यका दृष्टिले बढ्ता प्रभावकारी हुने ठानेर पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन् । माटो पनि जतासुकैको पवित्र हुन नसक्ने भएकाले तीर्थस्थलको माटालाई टीकाका लागि सर्वोत्तम ठानिएको हो । तीर्थस्थलको पवित्र माटामा विभिन्न किसिमका सङ्क्रामक कीटाणुलाई नष्ट गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । माटाको टीका लगाएर यत्रतत्र जान वर्तमान समयमा असभ्यजस्तो ठानिनुपर्ने बाध्यता भएकाले चन्दनवृक्ष पाइएसम्म त्यसको चन्दन उपयोग गर्नुपर्छ । चन्दन लगाउनाले हाम्रो मस्तिष्कलाई शान्ति र शीतलता प्राप्त हुन्छ । साथै सोच्ने शक्तिको विकास र मानसिक थकावटबाट पनि मुक्त हुन मद्दत पुग्छ ।
रचनाको टीका किन लगाउने ?
पहिला पहिला हाम्रा गाउँघरहरुमा बेसारका गानाहरु कुटेर धुलो बनाई त्यसमा निबुबा वा अमिलाको रस राखेर रचना नामक टीका बनाउने प्रचलन थियो तर यस किसिमको प्रचलन वर्तमानमा प्रायः लोप भइसक्यो । हाल बजारमा पाइने रोरी त्यही रचनाकै आधुनिक रुप हो । बेसारले हाम्रो छालालाई पूर्णतया सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ । यथासम्भव रचनाको उत्पादन गरी टीका लगाउन सकेका खण्डमा हाम्रो निधारको छालालाई र मस्तिष्कका स्नायुलाई समेत सदैव प्राकृतिक रुपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ । अलिकति जाँगर चलाउने हो भने वर्तमान समयमा हाम्रा लागि रचना उत्पादन गर्न त्यति गाह्रो पनि पर्दैन ।
विभिन्न टीकाहरु लगाउनुको रहस्य के हो ?
आकारप्रकार र रङका दृष्टिले टीकाहरु विभिन्न किसिमका हुन्छन् । ऊध्र्वपुण्ड्र अर्थात् ठाडो तीनधर्के टीका लगाउनेलाई हामी सबैले वैष्णव सम्प्रदायका भक्तजन भनेर चिन्दै आएका छौँ । त्रिपुण्ड्र अर्थात् तेर्सो तीनधर्के टीका लगाउनेलाई हामीले शैव सम्प्रदाय वा शिवका भक्तजनहरु भनेर चिन्ने गरेका छौँ । यसैगरी न ठाडो न तेर्सो सामान्य गोलाकारको टीका लगाउनेहरु कुनै सम्प्रदायमा दीक्षित नभएका भक्तजन रहेछन् भनेर बुझ्ने गरेका छौँ । नारद पुराणमा भने ब्राह्मणले ऊध्र्वपुण्ड्र, क्षत्रियले त्रिपुण्ड्र, वैश्यले अर्धचन्द्राकारको टीका र शूद्रले बाटुलो टीका लगाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रातो टीकालाई क्रान्ति वा ऊर्जाको प्रतीक, पहेँलो टीकालाई पितृको प्रसाद र कालो टीकालाई अग्निको प्रतीक ठान्न सकिन्छ । विशेष गरी बच्चाबच्चीलाई कालो टीका लगाउनाले कसैको आँखा लाग्दैन भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा अद्यावधि कायमै छ ।
महिलाले सिउँदामा सिन्दूरको टीका किन लगाउने ?
अद्भुत रामायणमा उल्लेख भएअनुसार हनुमान्ले सीताजीसँग “तपाईंले सिउँदोमा किन सिन्दूर लगाउनुहुन्छ ?” भनेर प्रश्न गरेछन् । त्यस प्रश्नको प्रत्युत्तरमा सीताजीले “सिउँदोमा सिन्दूर लगाउनाले मेरा स्वामीजी दीर्घायु हुनुहुन्छ” भनिछन् । त्यो सुनेर सिउँदोमा मात्र सिन्दूर लगाउँदा त स्वामीको दीर्घायु हुन्छ भने मैले आफ्नो सारा शरीरभरि सिन्दूर लगाएर आफ्ना स्वामी रामचन्द्रको दीर्घायुको कामना गर्छु भनेर हनुमान्ले स्वामीप्रति भक्तिभाव प्रकट गरेछन् । त्यही भएर होला आजकल पनि हनुमान्जीको पूरै मूर्तिलाई सिन्दूरले पोतिएको हुन्छ । यस कथानकका अतिरिक्त महिलाको सिउँदाको भाग अत्यन्त कोमल हुन्छ र त्यसको रक्षा गर्नका लागि सिन्दूर लगाउने प्रचलन बसेको हो । सिन्दूरले शरीरमा विद्यमान विद्युतीय उत्तेजनालाई नियन्त्रण गर्छ र बाह्य दुष्प्रभावबाट बचाउँछ । विधवा हुनुपर्ने योगबाट बचाउनका लागि पनि सदैव सिन्दूर लगाइन्छ । महिलाले सदैव टाउको नुहाइरहन असम्भव हुँदा लिखा र जुम्राहरु पर्ने सम्भावना बढ्ता हुन्छ । त्यसबाट बच्नका लागि पनि सिन्दूर लगाउने गरिएको हो । सिउँदो महिलाको सौभाग्यको प्रमुख सूचक भएका कारण पनि सिउँदोमा सिन्दूर लगाउने गरिएको हो । सिउँदोमा लगाउने सिन्दूरको यस किसिमको मह¤व भए तापनि वर्तमानमा आफ्नो विवाहका दिनमा बाहेक अन्य दिनमा सिउँदोमा सिन्दूरको टीका नलगाउने महिलाहरुको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
धार्मिक टीका भगवान्लाई अर्पण गरेपछि आपैm पनि लगाउन सकिन्छ भने सांस्कृतिक टीका अन्य व्यक्तिद्वारा लगाइन्छ । टीका लगाउँदा विशेषतः साहिँली औँला र बूढी औँलाको उपयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ । साहिँली औँलाले टीका लगाउँदा शान्ति मिल्दछ भने बूढी औँलाले टीका लगाउँदा प्रसिद्धि र आरोग्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । विशेष गरी पूर्वतर्पm फर्की बसेर नै टीका लगाउनु राम्रो मानिन्छ । टीका लगाउनुका थप शास्त्रीय र वैज्ञानिक कारणहरुका बारेमा हामी सबैद्वारा अन्वेषण हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।